कसरी हाम्रो दैनिक जीवनलाई स्वस्थ्य राख्ने ?
काठमाडौं ।दीर्घराज प्रसाई हामी कसैमा दाँतको रोग छ भने, दाँतको रोगबाट बच्न सँधै खाना खाएपछि बिहान दुइटा न्वाड र बेलुका खाना खाएपछि दुइृटा ल्वाड चपाइरहने हो भने दाँतको रोग कहिले लाग्दैृन । यदि दाँतमा रोग...
काठमाडौँ । नेपालमा आजदेखि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुँदैछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहान १० बजे भर्चुअल माध्यमबाट खोप अभियान उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटन क्रममा शुक्रराज...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोनाविरुद्दको १० लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन कोत्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारत सरकारको तर्फबाट उपहार स्वरुप कोरोनाविरुद्दको...
भारतले नेपाललाई दियो १० लाख डाेज काेभिडविरूद्धकाे भ्याक्सिन, बिहीबार आइपुग्ने
काठमाडाैँ । भारतले १० लाख डोज कोभिडविरूद्धकाे भ्याक्सिन नेपाललाई अनुदानमा दिने भएकाे छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अनुदानमा प्राप्त १० लाख डाेज खाेप भाेलि (बिहीबार) काठमाडाैं आइपुग्ने जानकारी दिएकाे छ...
जेनेभा, ७ माघ । कोरोनाको नयाँ स्वरुपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ । प्राप्त समाचारअनुसार यो सङ्क्रमण विश्वका ६० देशमा पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार सो...
नेपालमा कोरोनाको खोप ‘कोभिशिल्ड’लाई आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति (सूचनासहित)
काठमाडौँ । नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोपलाई आपतकालीन प्रयोग अनुमति प्रदान गरिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा बनेको‘कोभिशिल्ड’लाई नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्न अनुमति दिएको हो । विभागले शुक्रबार विभागीय निर्णय गर्दै कोभिशिल्डलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति...
कोरोना खोप खरिद र वितरणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री त्रिपाठीले खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताएका...
अर्को शनिवारदेखि भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप
काठमाडौं । भारतमा अर्को शनिवार अर्थात माघ ३ गतेदेखि कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन थालिने भएको छ । भारतमा सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्यकर्मी तथा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्यरत व्यक्तिहरुलाई खोप लगाइने बताइएको छ । उनीहरुको संख्या करिव तीन...
ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले कोरोना बिरामीको उपचारलाई निरन्तरता दिने
काठमाडौं । ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले कोभिड–१९बाट संक्रमित विरामीको उपचारलाई निरन्तरता दिने भएको छ । अस्पतालले नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार १८ शैयाको सघन उपचार कक्ष सहित ५४ शैया छुट्याएर कोभिड उपचार गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि...
होमियोप्याथिक उपचार पद्दति उत्तराधुनिक र नविनतम उपचार पद्दति हो : डा. खगेन्द्र कटुवाला
काठमाडौ । तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालद्वारा सञ्चालित सञ्चार केन्द्र नेपालको सहकार्य र जनभावना होमियोप्याथिक एण्ड होलिस्टिक हस्पिटलको आयोजनामा कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा होमियोप्याथिक उपचार पद्दति सम्बन्धी जानकारी दिने उदेश्यले आज एक कार्यक्रमको...